ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ပေါ့ဘာကြောင့် အကျပ်ရိုက်နေပြန်တဲ့ ယူနိုက်တက် – FBV SPORT NEWS
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ပေါ့ဘာကြောင့် အကျပ်ရိုက်နေပြန်တဲ့ ယူနိုက်တက်
April 23, 2021 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမယ့် အခြေအနေတစ်ခုတော့ ရှိနေသေးကြောင်း သိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာလက်ရှိမှာ မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး ကစားသမားအပြောင်းအရွေ့တွေ့ကြောင့် အကျပ်အတည်းကြုံလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာပါ.။
The Sun သတင်းစာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်ဟာ ပေါလ်ပေါ့ဂ်ဘာကလည်း အသင်းရဲ့ အနာဂတ်မှာ ပါဝင်နေဦးမယ်ဆိုရင် စာချုပ်သစ်မှာ ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့ အာမခံတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပါ့ဂ်ဘာနဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့အခြေအနေတွေက သူ့ရဲ့အေးဂျင့် မီနိုရွိုင်းအိုလာကြောင့် မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပဲ ရွိုင်းအိုလာက ပေါ့ဂ်ဘာရဲက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဆက်ရှိမယ့် အချိန်တွေ ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ကွင်းလယ်လူဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဓိကကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိအသင်းမှာလည်း အထူးခြေစွမ်းပြသလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတွေအရတော့ ပေါ့ဂ်ဘာရဲ့ လက်ရှိစာချုပ်ဟာ ၂၀၂၂ ဇွန်လမှာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ အလွတ်နဲ့ လက်မလွှတ်ချင်ရင် ဒီနွေရာသီမှာ ရောင်းထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ နောက်ဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့ ပေါ့ဂ်ဘာကို စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်အထိ အသင်းမှာ ဆက်ထိန်းထားပြီး နောက်နှစ်မှ အလွတ်နဲ့လက်လွှတ်သွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ သတင်းတွေကတော့ ဖာနန်ဒက်စ်ကလည်း ပေါ့ဂ်ဘာရဲက အခြေအနေကို အတူတွဲကစားရင်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ ဖာနန်ဒက်စ်ကို လစာအများအပြားနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ စီစဉ်နေပေမယ့် ဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ လာမယ့်ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် ပေါ့ဂ်ဘာရဲ့ စာချုပ်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အစောပိုင်းသတင်းတွေအရလည်း ဖာနန်ဒက်စ်က အသင်းမှာသူ့ရဲ့ အနာဂတ်ကို မဆုံးဖြတ်မီ အသင်းရဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြင်တွေ့ချင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလက မန်ချက်စတာကို ရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း အသင်းရဲ့ မရှိမဖြစ် ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာလည်း ၃၂ ပွဲကစားထားရာမှာ ၁၆ ဂိုးသွင်းပြီး ၁၁ ဂိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြအိုလီဂန်နာဆိုးလ်ရှားကလည်း ကစားသမားကို အသင်းမှာ သေချာပေါက် ကာလရှည် ဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့ကိုသာ အလိုရှိနေပါတယ်။ ပေါ့ဂ်ဘာကိုယ်တိုင်ကတော့ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စကိုင်းစပေါ့နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အသင်းမှာပျော်ရွှင်နေကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
ပါ့ဂ်ဘာက “ ကျွန်တော်ပျော်နေပါတယ်။ သေချာပေါက်ကို ပျော်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်တော့မယ်လေ၊ အရမ်းကို နီးစပ်နေပါပြီ( ဆုဖလားတွေ ရရှိဖို့ ) ယူရိုပါလိဂ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲဖြစ်သလို ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုလည်း စီးတီးလက်ထဲကနေ လုယူနိုင်ဖို့ လက်တစ်ကမ်းအကွာကို ရောက်နေပါပြီ ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို အသင်းမှာ ပေါ့ဂ်ဘာ ပျော်ရွှင်နေတုန်း စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်အခါလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ပေါ့ဘာရဲ့အေးဂျင့်ရိုင်းအိုလာက ပေါ့ဘာအတွက်တစ်ပတ်ပေါင် ၅သိန်းတောင်းထားပီး အဆင်မပြေရင် ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ အကျပ်ကိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဘရူနိုဖာနနျဒကျနဲ့ပေါ့ဘာကွောင့ျ အကပြျရိုကျနပွေနျတဲ့ ယူနိုကျတကျ
မနျခကြျစတာယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျလူ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ အဆငျသင့ျဖွဈနပေမေယ့ျ အခွအေနတေဈခုတော့ ရှိနသေေးကွောငျး သိရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာလကျရှိမှာ မတညျငွိမျမှုတှနေဲ့ကွုံတှေ့နရေပွီး ကစားသမားအပွောငျးအရှေ့တှေ့ကွောင့ျ အကပြျအတညျးကွုံလာနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေလေညျးရှိနတောပါ.။
The Sun သတငျးစာရဲ့ ဖောျပွခကြျအရ ပေါျတူဂီလကျရှေးစငျဟာ ပေါလျပေါ့ဂျဘာကလညျး အသငျးရဲ့ အနာဂတျမှာ ပါဝငျနေဦးမယျဆိုရငျ စာခြုပျသဈမှာ ခကြျခငြျးလကျမှတျထိုးဖို့ အာမခံတယျလို့ ဖောျပွခဲ့ပါတယျ။
ပေါ့ဂျဘာနဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့အခွအေနတှေကေ သူ့ရဲ့အေးဂငြ့ျ မီနိုရှိုငျးအိုလာကွောင့ျ မတညျငွိမျသေးတဲ့ အခွအေနမှောပဲ ရှိနပေါသေးတယျ။ ဒီဇငျဘာလတုနျးကပဲ ရှိုငျးအိုလာက ပေါ့ဂျဘာရဲက အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ ဆကျရှိမယ့ျ အခြိနျတှေ ပွီးဆုံးတော့မှာဖွဈကွောငျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ နောကျလအနညျးငယျအကွာမှာတော့ ကှငျးလယျလူဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဓိကကစားသမား တဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပွီး လကျရှိအသငျးမှာလညျး အထူးခွစှေမျးပွသလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သတငျးတှအေရတော့ ပေါ့ဂျဘာရဲ့ လကျရှိစာခြုပျဟာ ၂၀၂၂ ဇှနျလမှာ သကျတမျး ကုနျဆုံးမှာဖွဈတာကွောင့ျ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ အလှတျနဲ့ လကျမလှှတျခငြျရငျ ဒီနှရောသီမှာ ရောငျးထုတျတာပဲဖွဈဖွဈ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုတာပဲဖွဈဖွဈ မဖွဈမနေ ပွုလုပျဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျတို့ နောကျဆုံးလုပျနိုငျတာကတော့ ပေါ့ဂျဘာကို စာခြုပျသကျတမျး ကုနျဆုံးခြိနျအထိ အသငျးမှာ ဆကျထိနျးထားပွီး နောကျနှဈမှ အလှတျနဲ့လကျလှှတျသှားဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ သတငျးတှကေတော့ ဖာနနျဒကျဈကလညျး ပေါ့ဂျဘာရဲက အခွအေနကေို အတူတှဲကစားရငျး အနီးကပျစောင့ျကွည့ျနတေယျလို့ ဖောျပွခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျဟာ ဖာနနျဒကျဈကို လစာအမြားအပွားနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ စီစဉျနပေမေယ့ျ ဖာနနျဒကျဈကတော့ လာမယ့ျရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျကို စိနျခေါျနိုငျဖို့အတှကျ ပေါ့ဂျဘာရဲ့ စာခြုပျအခွအေနကေို စောင့ျကွည့ျနပေါတယျ။ အစောပိုငျးသတငျးတှအေရလညျး ဖာနနျဒကျဈက အသငျးမှာသူ့ရဲ့ အနာဂတျကို မဆုံးဖွတျမီ အသငျးရဲ့ နှရောသီအပွောငျးအရှှေ့ လှုပျရှားမှုတှကေို မွငျတှေ့ခငြျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈဟာ ၂၀၂၀ ဇနျနဝါရီလက မနျခကြျစတာကို ရောကျရှိလာပွီးနောကျပိုငျး အသငျးရဲ့ မရှိမဖွဈ ကစားသမားတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီရာသီမှာလညျး ၃၂ ပှဲကစားထားရာမှာ ၁၆ ဂိုးသှငျးပွီး ၁၁ ဂိုးဖနျတီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွအိုလီဂနျနာဆိုးလျရှားကလညျး ကစားသမားကို အသငျးမှာ သခြောပေါကျ ကာလရှညျ ဆကျထိနျးနိုငျဖို့ကိုသာ အလိုရှိနပေါတယျ။ ပေါ့ဂျဘာကိုယျတိုငျကတော့ မကွာသေးမီက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ စကိုငျးစပေါ့နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ အသငျးမှာပြောျရှှငျနကွေောငျး ဖှင့ျဟခဲ့ပါတယျ။
ပေါ့ဂျဘာက “ ကြှနျတောျပြောျနပေါတယျ။ သခြောပေါကျကို ပြောျတာပေါ့။ ကြှနျတောျတို့ ရောကျတော့မယျလေ၊ အရမျးကို နီးစပျနပေါပွီ( ဆုဖလားတှေ ရရှိဖို့ ) ယူရိုပါလိဂျမှာ ယှဉျပွိုငျနဆေဲဖွဈသလို ပရီးမီးယားလိဂျကိုလညျး စီးတီးလကျထဲကနေ လုယူနိုငျဖို့ လကျတဈကမျးအကှာကို ရောကျနပေါပွီ ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောင့ျ အခုလို အသငျးမှာ ပေါ့ဂျဘာ ပြောျရှှငျနတေုနျး စာခြုပျသကျတမျး တိုးမွှင့ျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျအခါလညျး ဖွဈနပေါတယျ။ ပေါ့ဘာရဲ့အေးဂငြ့ျရိုငျးအိုလာက ပေါ့ဘာအတှကျတဈပတျပေါငျ ၅သိနျးတောငျးထားပီး အဆငျမပွရေငျ ရီးရဲမကျဒရဈအသငျးနဲ့ ဆကျလကျညှိနှိုငျးသှားမယျလို့ အကပြျကိုငျထားတာလညျးဖွဈပါတယျ.
Manchester United identify two possible replacements for Ed Woodward